कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई के भने ? सुन्ने जति सबै चकित « Deshko News
कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई के भने ? सुन्ने जति सबै चकित
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सल्लाह नगरेरै यादवको मन्त्रालय सारेपछि यादवले पदभार ग्रहणका क्रममा सञ्चारकर्मीमाझ ओलीको आलोचना वा विरोध गर्छन भन्ने आम बुझाइ थियो ।
तर, यादवले नयाँ जिम्मेवारीप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् । यादवले पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बढी नै माया गरेको बताए । मन्त्रालय सार्नेबारे प्रधानमन्त्रीले तपाईंसँग परामर्श गर्नु भएको थियो भनेर पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘धेरै मन्त्रालयको अनुभव होस्, अनुभवी नेता बनोस् भनेर पठाएको हुनसक्छ । अर्को विषय मिल्ने मन्त्रालयमा पठाउँ भनेर पनि हुनसक्छ । अलि बढी नै माया गरेर पनि हुनसक्छ ।’ मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको उनको भनाई छ ।
मधेस मुलबाट उदाएका नेता यादवले मधेसीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयनको बेला आएको समेत बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन राजनीतिक विषय हो, हामीले यसअघि नै सहमति गरिसकेका छौं । अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ ।’ कानुन मन्त्रालयमै बसेर संविधान संशोधन गराएरै छाड्ने उनको भनाई छ ।